China Industrial Soy Bean Oil Press Machine mpanamboatra sy mpamatsy | Huipin
Gazety Spiral Oil
amin'ny Sarimihetsika plastika
Masinina fanontam-boanjo soja indostrialy
Ity fitaovana ity dia manana ireto singa manaraka ireto: steamer, mekanisma famahanana (mekanisma famahanana gazety), tranom-borona ary vatan-tsolika (ao anatin'izany ny mekanika fanitsiana mofomamy) ary fitaovana fampitana.
Ny Cooker amin'ity fitaovana ity dia mpahandro telo sosona mitsangana. Izy io dia mitovy amin'ny mpahandro roaster mpanampy mitsangana. Izy io dia nitaingina ny tongony manohana ny frame. Ny fandefasana azy dia entin'ny reducer tsy miankina. Izy io dia afaka manitsy ny mari-pana sy ny hamandoan'ny atin'ny menaka alohan'ny fanindriana, mba hahatratrarana ny takian'ny fanerena.
2) mekanika famahanana:
Ny ampahany miasa amin'ny mekanisma famahanana dia eo anelanelan'ny fivoahan'ny vilany fandrahoana sy ny faran'ny famahanana ny vatan-tseranana. Izy io dia misy tsorakazo manindry miaraka amin'ny lelan'ny tadiny eo amin'ny faran'ny farany sy ny barika tsy misy. Ao amin'ny fidiran'ny barika banga, misy vavahady fanaraha-maso rotary hifehezana ny fikorianan'ny banga. Misy hopper napetraka ao ambanin'ny vavahady, izay ahafahana mijery ny toe-javatra banga ary azo alaina ny santionany amin'ny bileta. Ny fandefasana azy koa dia entin'ny reducer mitsangana tsy miankina
3) Paosin'ny tranom-borona sy visy:
Ny valizy fanaovan-gazety sy ny vodin-tsolika no tena miasa hiasa amin'ny fitaovana. Ny billet noterena avy amin'ny mekanisma famahanana dia niditra hatrany amin'ny elanelana misy eo amin'ny valizy fanaovan-gazety sy ny visy (antsoina hoe "efitrano fanaovan-gazety"). Noho ny fihodinan'ny vatan-tsolika sy ny fihenan'ny elanelam-potoana eo amin'ny efitrano fanaovana gazety, dia eo ambany fanerena mahery ny bileta. Ny ankamaroan'ny menaka dia voatsindry ary mivoaka amin'ny alàlan'ny banga an'ny bara fanaovana gazety amin'ny tranom-pahefana
Ny visy ny visy fanindriana visy dia tsy mitohy. Ny vatan-tsipika fanindronana isan-tsokajina dia misy tampon-kery. Tsy misy tadin-tsolika manery azy. Ny tsindry visy tsirairay dia tapaka (jereo ny sary 3). Ny "scraper" (jereo ny sary 4) dia apetraka amin'ny tranom-borona manindry. Ny nifin'ny scraper dia mifanaraka amin'ny endrika conical ary ampidirina ao amin'ny fiatoana ny visy fanerena, izay tsy manakana ny fihodinan'ny vatan'ny fanindronana, dia vita ny dingan'ny fanerena mitohy. Mandritra izany fotoana izany dia mihalefaka ilay bileta tsindry, ka malama ny lalan'ny solika ary mora esorina ny menaka
ZY204 Ex-press expeller dia mpanondrana menaka mitohy izay mety amin'ny fametahana paompy na fanindriana
in-droa ao amin'ny zavamaniry menaka legioma, ary ampiasaina hiatrehana masomboly misy menaka toy ny rapeseed, voanjo, tanamasoandro
voa sy persimmon voa.
1) Andrim-panjakana mandeha ho azy dia mpamorona vokatr'izany fampihenana ny hamafin'ny fiasan'ny mpandraharaha.
2) Miaraka amin'ny fahaiza-mitantana lehibe, ny faritra atrikasa, ny asa fanjifana herinaratra miasa,
mihena amin'ny fomba solontena ny fitantanana sy ny fikojakojana.
3) Malalaka ny mofomamy voatetika nefa tsy potika izay tsara hiparitahan'ny solvent.
4) Ny isan-jaton'ny solika sy ny rano amin'ny mofomamy voatetika dia mety amin'ny fametahana solvent.
5) Ny menaka voatsindry dia manana kalitao tsara kokoa izay notsindriana na nohosorana mandritra ny fametahana iray.
Fahaiza-manao 65-80 taonina / 24ora
(voana tanamasoandro na voan'ny fanolanana ohatra)
Motor elektrika Y225M-6,1000R.PM
Hery 37KW, 220 / 380V, 50HZ
Refy ankapobeny 3000 * 1856 * 3680mm
Lanja afa-karatsaka 5800kgs
Menaka sisa tavela amin'ny mofomamy manodidina ny 13% (ao anatin'ny toe-javatra mahazatra)
Teo aloha: Roaster Cooker Steam Cooker ho an'ny mpanondrana solika
Manaraka: Sehatra fanadiovan-tsolika masaka mahandro
Masinina vita amin'ny menaka soja soja
Vokatra asongadina, Sitemap, Vokatra rehetra Masinina vita amin'ny menaka mangatsiaka, Gazety Oliva Oliva, Masinina fanaovan-gazety menaka kely, Mpanondraka solika voa, Mpanondraka solika, Masinina fanaovan-gazety solika,